Izibuko ezishushuluza noma izibuko zeqhwa Ngizoqala kuphi? - ULLER
Uma usacabanga, kuleli qophelo lesizini, mayelana nokuqala emidlalweni yasebusika, akukephuzi kakhulu ukubuyekeza okuncamelayo lapho ukhetha ukuthi uzoqala kuphi, khetha ukuthi yimaphi amasimo afanelekile kuwe futhi uqonde ukuthi kufanele uthenge kuqala yini eyakho Izibuko zeSki noma eyakho izibuko zeqhwa.
Into yokuqala okufanele uyazi, futhi ngokuqinisekile uzokwazi kahle, ukuthi yomibili imikhakha yezemidlalo eqhweni, kodwa ukuthi ihluke ngokuphelele, njengoba kunjalo nangemishini nezinsiza okudingeka uzenze. Ngokuqondile, ngale ndatshana sizama ukuveza umehluko obalulekile phakathi kokushushuluza okuvamile nokushushuluza. ukushibilika eqhweni. Ngalokhu, ngokuqinisekile uzokucaca kahle lapho ukhetha phakathi kwalokhu okubili.
Into esemqoka ukuthi, futhi impela usuvele uyayazi, ekushushuluzeni eqhweni uhlonyiswe ngebhodi onyaweni ngalunye naseqhweni ukukwenza ebhodini elilodwa. Kuzo zombili izindlela umzimba usetshenziswa ngendlela efanayo, yize kwenziwa ukunyakaza, amasu nezinzuzo ezitholakele zihlukile kancane.
Funda bese uthola okuthe xaxa mayelana nokuthi ngayinye yalezi ziqondiso zemidlalo yeqhwa injani ukuze ukhethe okuhle kakhulu Izibuko zeSkinoma eyakho izibuko zeqhwa!
El ski Ngokuyinhloko umdlalo wezintaba obandakanya inqubo yokufunda encike kakhulu ezimfanelweni zomzimba nezengqondo zomuntu oshibilika eqhweni. Kwabaqalayo kunconywa ukuqala emithambekeni ngokuthambekela okulinganiselayo, okufanelekile kubo.
Ngokuhamba kwesikhathi, lowo muntu uthola ukuzethemba futhi abe nesibindi semithambeka yokuthambekela okukhulu, lapho angathola khona imizila ngejubane eliphakeme elimvumela ukuthi aqeqeshe amandla akhe okulawula. I-skier, ikakhulukazi, iqeqesha umzimba ongezansi womzimba wayo, futhi, kancane, imiphetho ephezulu. I-skier kufanele ihlale iphethe yonke imishini edingekayo yesenzo, kufaka phakathi okuhle Izibuko zeSki.
Inhloso ukuthola umkhuba, ikhono, ukuzethemba nokulawula okwanele ukukwazi ukunqoba noma yikuphi ukungalingani noma okungalindelekile okukuphazamisayo, ngaso sonke isikhathi ngokugxila emvelweni, ezingozini ezibandakanya zonke izithiyo ezisentabeni . Ngalo mqondo, ukushushuluza kunengxenye ekhethekile ye-adventure okungenzeka ukuthi i- iqhwa ayinayo noma leyo, noma kunjalo, yenziwa ngenye indlela.
Ukuhamba ngeqhwa kufaka ukusebenza ngaphezulu, cishe, emzimbeni ongezansi womuntu. Kudinga ibhalansi enkulu nokuvumelanisa ukunyakaza kunokuhamba ngokushushuluza, ikakhulukazi ngesikhathi senqubo yokufunda, ngoba konke isisindo siwela endaweni encane (ibhodi) futhi azikho izigxobo zokusekela. Lokhu kusho ukuthi ekuqaleni uzochitha isikhathi esiningi phansi.
Kunoma ikuphi, ngokuzijwayeza okwanele, ukukhithika kweqhwa kulula kunokushibilika eqhweni ngomqondo wokuthi unebhodi elilodwa kuphela nayo yonke inqubo elikuyo, ukunyakaza akulona olusezingeni eliphezulu njengasesikhathini sabashushuluzayo. Ukufeza amakhono athuthukile eqhweni kulula futhi kuyashesha kune-skiing.
Impela ngemuva kwalokhu uzobe uzibuza ...Futhi injani i-freeride?
Imodi 'ye-freeride' iqukethe ukushiya ngokoqobo imithambeka yokushushuluza ukuze uthole izindawo zeqhwa eliyintombi lapho ungahlala khona okwedlulele, okwasendle nokwangempela. Le ndlela ekhangayo, ebilokhu ikhula ngentshisekelo ngabashushuluzi eminyakeni yamuva nje, igcine ingxenye yalo mphakathi kude nezindawo zokungcebeleka okushibilika eqhweni ngoba bekholelwa ukuthi ukuzenzela impilo kungcono ukuzitholela izindawo ezinhle lapho bezokwenza khona lesi siyalo. . Ezinye iziteshi ziphendulile kulesi sicelo, njenge IVallnord noma iGrandvalira.
Sabelana ngale vidiyo epholile kakhulu ukuze kungabazeki ukuthi yikuphi ukuhamba kwamahhala okumsulwa futhi okulula.
Uma ngabe ubuzibuza ... I-Arcalís, esiteshini iVallnord, njengamanje singesinye sezethenjwa ezibaluleke kakhulu ku- i-freeride ski Ngoba isimo saso silungele ukuvikelwa kwemvelo emoyeni, ngezindlela zayo ezingaphezu kuka-130 futhi ngoba indawo igubha iminyaka engama-20 inikela ngokuzijabulisa ngaphansi kwalesi simo. Kumele kuqashelwe ukuthi minyaka yonke, eVallnord, i-FWT noma I-Freeride World Tour.
Grandvalira, ngokwengxenye yayo, ivuselelwe ukunikela ngokushushuluza ngekhwalithi ephezulu kuzivakashi zayo. Benze umncintiswano weGrandride futhi bangena esifundeni somhlaba wonke sokuhlolwa kwe-ski. Baphinde basungula iFreeride Center, isigaba esisha sesikole sabo, esikhethekile kuma-off-piste descents anikela ngamakilasi angabodwana nabeqembu. Ungajabulela futhi ku- Grandvalira kwephakeji le-Ski Safari, ukuphuma nabaqaphi abaqeqeshiwe abakuphelezela kuzindlela ezinhle kakhulu.
Eqinisweni, umncintiswano weTotal Fight Masters of Freestyle ungomunye wemincintiswano emikhulu kuleli dolobha, ohlanganisa abagibeli beqhwa abahamba phambili nabagibeli abakhululekile besikhathi e-Andorran ski resort. Grandvalira.
I-El Tarter Snowpark iba yindawo yempi egcwele ukuqaqa okumnandi nobumnandi. Lo mcimbi unokwehlukaniswa kwezinkanyezi ezi-5 kweWorld Snowboard Tour kanye nesigaba segolide sesekethe le-AFP (isifunda esizimele sama-freestyle), esiba ngomunye wemicimbi eyisithenjwa ekhalendeni lomhlaba lesiyalo se-slopestyle.
Umncintiswano we-snowboard kumodi ye-slopestyle, ibaluleke kakhulu eningizimu yeYurophu ngosizo lwabagibeli bezinga eliphakeme kakhulu. Umcimbi ugcine i-World Snowboard Tour yezinkanyezi ezinhlanu (ephuma ezinkanyezini eziyisithupha ezingaba khona), enikezwa yona.
Uma unesithakazelo kufayela le- iqhwa, the ski noma i i-freerideNawa amasayithi ambalwa amahle lapho ungangena khona ngale ndlela. Futhi uma uke wakwenza kwenye indawo oyithandile, ungangabazi ukusihlanganyela nathi! Ekupheleni kosuku akukhathalekile ukuthi uqala kuphi, okubalulekile ukusibona sisebenza!